Hoyooyin Somali ah oo loogu xiray dalka Ingiriiska “Gudniinka” gabdhahooda - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka Hoyooyin Somali ah oo loogu xiray dalka Ingiriiska “Gudniinka” gabdhahooda
Hoyooyin Somali ah oo loogu xiray dalka Ingiriiska “Gudniinka” gabdhahooda
Dalka Ingriiska ayaa waxaa lagu xiray hoyooyin Somali ah oo lagu soo eedeeyay in ay si qarsoodi ah ugu sameeyeen gabdhahooda gudniinka Fircoodiga ah oo dalka Ingirirska ka ah sharci daro.
Nin Somali ah oo ku soo gaabshay magaciisa Yusuf ayaa yiri “ waxa gurigeeyga iigu yimid dad ka socda dowlada Ingriiska qaybta xanaanada caruurta, waxa ay qaateen caruurteena, waxa ayna xabsi u taxaabeen xaaskeyga iyaga oo aan waxba na waydiini”.
Yusuf ayaa qorsheynayay in uu caruurtiisa u qaado Somaliland, sidaas darteed ayaa waxa dowlada Ingriiska lagu wargaliyay in sababta uu u qaadayo caruurtiisa ay tahay in uu ku soo sameeyo gudniinka fircooniga ah.
Sharciga Ingriiska ayaa qaba in cidii lagu helo in ay caruurtooda ku sameeyeen Gudniinka Fircooniga ah lagu xakumo ilaa 14 sano oo xabsi culus ah. Horay ayaa hoyooyin Somali ah loogu helay danbi noocaan ah oo hada xabsi ku jira.
Waxa jira hay’addo difaaca xuquuqda gabdhaha oo Somali ka shaqeeyso kuwaas oo ka ka diga in Gabdhaha Soomaaliyeed la dhibaayeeto.
Next articleSaudi Arabia woos Horn of Africa states to protect Red Sea, Gulf of Aden
Xisbiga Himilo Qaran oo ku guuleesatay Dacwadii taalay Maxkamada Sare Dalka
Gudoomiye Najax ” waa lasoo qaban doona dadkii danbiyada ka galay gudaha dagmada Wanlawayn
Jahawareer ka jira cida mas’uulka ah ka hortaga CaronaVirus! G. Banaadir mise DFS?
Mohamed January 14, 2020 at 2:12 pm
Waa dhibaato muddo badan somali deris la ahayd Gudniinka ama jarjarida jidka gabdhuhu.Tan kale Qaadka oo ah masiibo qaran ayaa isaguna somaliya ka dhigay wadan ay lacagtiisa wadamo kale u ah dhaqaalaha ugu balaadhan halka somalidana ay dabadeed gaajo u dhintaan bedelkeeda.
Dumarka iyo ragga ku hawlan Gudniinka ama dhibaateynta gabdhaha waa inay dhadhamiyaan waxay xaq u leeyihiin
Wararka Sharmarke Xuseen - April 9, 2020
Maxkamadda sare ee dalka ayaa go’aan ka gaartay dacwadii u dhaxeysay Xisbiga Himilo Qaran ee uu hoggaamiyo Madaxweynihii hore Sheekh Shariif iyo Hey’adda Saadaasha...
Guddoomiyaha gobolka Shabeellaha hoose Ibraahim Aadan Cali Najax oo ka hadlayay degmada Wanlaweyn ee gobolka Shabeellaha hoose ayaa digniin u diray shakhsiyadka hubeysan eek...
Wararka Safia Ali Yasin - April 9, 2020
Iyada oo dalka Soomaaliya uu ka jirto cabsi ah in cudurka CaronaVirus uu dalka ku fidayo ayaa hadana waxa jira Jahawareer la xiriira cida...
Gudoomiye Najax ” waa lasoo qaban doona dadkii danbiyada ka galay...